Toliara : hatsaraina ny fitantanana ny seranana | NewsMada
Toliara : hatsaraina ny fitantanana ny seranana
Miroso tsikelikely amin’ny fametrahana ny fenitra iraisam-pirenena ao amin’ny serantsambon’ i Toliara ny tomponandraikitry ny Antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-dranomasina sy an-dranomamy (APMF) aty an-toerana. Araka izany, miova sy mihena ny gaboraraka eo anivon’ ity seranana ity ankehitriny. Hamafisina ny fitantanana ka tsy maintsy mahazo alalana avy amin’ny APMF avokoa ny olona rehetra manan-draharaha ao amin’ny seranan-tsambo. Efa mahatsikaritra izany ny mpitondra sambo vahiny ka mahatonga ny fiakaran’ny tahan’ny sambo ho efatra isam-bolana miditra amin’ny seranana amin’izao fotoana izao.
Antenaina hivoatra ny fivoaran’ny fitantanana, ahafahana mamerina ny fampidirana sambo mitondra fiara, efa nisy teo aloha izay najanona noho ny tsy fisian’ny fenitra handraisana ny entana. Misy ny vinavina hanitarana mianatsimo ny seranan-tsambo, ahafahana mandray sambo vaventy mihoatra 11 mailles raha mbola 7 mailles amin’izao fotoana izao. Hatreto, hamafisina ny famelomana ny ‘’Auto route marine’’ mampitohy an’i Toliara sy i Durban.
Hatreto, tena vokatra miditra sy mivoaka ao amin’ity seranana ity ny entana ilaina andavanandro sy ny vokatra mampalaza an’i Toliara.
Fantatra ireo nandritra ny fanofanana hiadiana amin’ny loto an-dranomasina sy ny fahaverezana solika ary loza an-dranomasina, miteraka ny fahalotoan’ny ranomasina, nomen’ny sampandraharaha misahana izany (OLP), natao taty Toliara, ny alakamisy sy zoma teo. Nahatratra 140 ny mpandray anjara.